VANA DZVAKURU | Kudzidzira chiGerman, Kudzidza chiGerman
High School Chikoro cheGermany
musha » General Tsika » KUSVIRA KWAVANA
German Education Center
GERMAN DZIDZISO YOKUDZIDZA PASI PESI NETEET. GERMAN COURSES NDIMA PAMWE NAWO.
DZVANYA, DZVANYA IZVOZVO
Chii chinonzi Kodzero dzeVana?
Kodzero dzevana; 20 inotariswa mukati mekuyera kwaNovember Nyika yeVana veKodzero neHuman rights. Pfungwa iyi ndiyo kodzero uye zviri pamutemo kodzero dzevana vese vari munyika kubva pavakazvarwa.
Musoro wenyaya iyi
1 Kuzivisa pane Kodzero dzeMwana
2 Dare rekodzero dzeMwana
3 Children Kodzero muTurkey
Kuzivisa nezve Kodzero dzeMwana
Rugwaro rwekutanga pakodzero dzevana rakaburitswa pa1917 pasi pezita rekuti 'Kuzivisa Kwekodzero dzeMwana'. Mavara ekutanga, zvakadaro, ndeyeGeneva Chirevo chekodzero dzeMwana dzakatenderwa neChinzwano cheMarudzi mu1924. Ichi chinyorwa chakagamuchirwa neUN uye chakagadziridzwa seZita reUN pamusoro peKodzero dzeMwana pa20 Mbudzi 1959.
Kunyange kodzero dzemwana dzese dziri pasi rese, kuzivisa kwakaburitswa ndiko kusaina kwenyika.
Gwaro iri rinotsanangura kodzero dzevanhu munzvimbo dzakasiyana siyana dzakaita seyechivanhu, yezvematongerwo enyika, yemagariro, ehupfumi uye etsika. Iwo makuru mapepa anoumba chibvumirano ndeaya; kusasarura zvinoreva zvakanakira zvemwana uye kutora chikamu muhupenyu hwomwana nekukura.
In Turkey akatanga iitwe sezvo National Uchangamire uye Vana Day akatanga iitwe uye akatanga muna April 23 12929.
Sangano reUN pamusoro pekodzero dzemwana rinoumbwa nezvinyorwa zve54. Uye urwu runyoro rwakazara kwazvo pamutemo pasi. Zvinoenderana neshoko rekutanga rechinyorwa ichi, chero munhu ane makore ari pasi pe18 anoonekwa semwana. Uye saka vane kodzero dzakakosha. Kana zvinhu zvisingakoshi zvinotariswa; kodzero yehupenyu nekusimudzira, kodzero yekuve nezita uye vagari uye kodzero yekuvadzivirira, kodzero yekuwana hutano uye dzidzo, kodzero yekuwana chiyero chekurarama chakaringana, kodzero yekudzivirirwa kubva mukushungurudzwa nekusaraswa, kodzero yekudzivirirwa kubva mukushandiswa kwehupfumi uye kupindwa muropa nezvinodhaka, varaidzo ,varaidzo uye tsika sekudaro kodzero yekuve nenguva yezviitiko. Kuwedzera kune kodzero idzi, kune kodzero yesununguko yekufunga uye kutaura, iyo kodzero yekutaura mafungiro avo pazvinhu zvine chekuita navo uye nekodzero yerusununguko rwekudyidzana. Kune kodzero zvakare dzevana vane zvakakosha zvido uye vana vakaremara.
Nyaya dzakadai sekushandira vana, kutora basa sevarwi, kushungurudzwa nemhirizhonga dzinoonekwa uye dzinoongororwa sekushungurudzwa kwevana.
KUFUNGA IZVI: Chii chinonzi BRUSELLA?
Komiti yekodzero dzeMwana
Iyo komiti yekuongorora mashandiro anoita iyo nyika dzakabvumidza Convention iyi kushandisa Chibvumirano. Komiti inoda kuti nyika dzitore Chibvumirano segwara kana zvatariswa mitemo yavo. Kuona kuti kodzero dzevana zvinoenderana nekuziva pane iyi nyaya. Mune mamwe mazwi, sekuziva kunowedzera, mwero wekuchengetedza kodzero dzevana unowedzera.
Zvevana Rights muTurkey
Kunyangwe yaive imwe yenyika dzekutanga kusaina kusaina Chirevo chekodzero dzeMwana ku World Summit yeVana paUN, ratidziro uye kupinda musimba kwesangano kwakaitwa muna Ndira 19892.
Turkey riri pakati vaitamira nokuparadzira mari isiriyo noruzivo zvikonzero kuti chirwise kodzero vana. Kune matambudziko akadai sedzidzo isina kukwana, kushaikwa kwemabasa, kugovera mari zvisina mwero. Kunyanya munyika yedu, kushungurudzwa kwevana, izvo zvakaitwa nekuregeredza hunhu hwemwana, ine nzvimbo yakakosha. Kunyanya munyika medu, kune kusakwana kwakadzika maererano nekodzero dzevana.
VAKANYANYA KUTI DZIDZE GERMAN NEMABHUKU NEZVINYANYA ZVINOGONA.
DZVANYA, DZIDZA GERMAN NEMABHUKU EASILY KUTUNGA ZERO KUYA MILIYONI
Izvo hazvina kumbobvira zvakapusa zvakadaro kudzidza maGerman mawadhi.
DZVANYA PANO, DZIDZA MAHORA EMAHARA IZVO IZVO
Dzidza chiGerman nepende redu rine mavara uye ita mitsara nyore.
DZVANYA PANO, DZIDZA GERMAN COLORI PANO
Iwe unoda kuita mari kubva internet?
DZVANYA PANO, DZIDZIRA NZIRA DZOKUDZIRA MARI KUSVIRA PAMUKADZO
Zuva rekutanga reChikoro
Ziso Zvehutano Ziso
Nzira dzekuita mari kubva kumba uye neInternet
Quotations yekudzidza mutauro wechiGerman pasina internet. GERMAN COURSES PANE Chero ...
SKIN DZIVA MABHABHUKU
Muenzaniso: Elif Demirci
[Rega kupindura kunotaura]
MUVANZI KUCHOKURUKURWA - 0 KUBVUNZA
Hapana mhinduro yet.
Chii chinonzi Chitendero cheGerman? Ndechitendero chipi icho maGerman anotenda mazviri?
Dzidzo Sisitimu muGerman uye Kushanda kweGerman Education System
Hupenyu hwevana kuGermany
MaGerman Vanoshandisa kupi Mari yavo? Mararamiro muGerman
Ndeapi Iwo Akanyanya Kutsvaga Maporofesa kuGerman? Chii chandingaite kuGerman?
German Application - Game - Program
Germany Visa A1 Bvunzo uye Mhuri Kubatana
Shona Turkish Translation
License & Mitemo yekushandisa